खगेन्द्र पन्त ,
२०७५ फाल्गुण ११ शनिबार ०७:०३:००
प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको र आमरूपमा पनि देखिएको राम्रो प्रगति हाम्रै मन्त्रालयको हो । कामका सन्दर्भमा हाम्रो मन्त्रालयजस्तो हुनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ । उहाँले सधैँ मलाई उत्साहित नै बनाइराख्नुभएको छ । बाँकी साथीहरूले पनि राम्रो गर्नुभएको छ भनेरै भनिरहेका हुन्छन् । तपाईं आफैँले जज गर्दा पनि हुन्छ नि यो कुरा त । मलाई यति थाहा छ कि मैले जे–जे गर्छु भनेर सूची बनाएको थिएँ ती सबै काम अगाडि बढेका छन् । र, धेरै काम पूरा भएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि किन कम नम्बर आयो मलाई थाहा भएन ।
बिचौलियाहरूको उद्देश्य मलाई हतोत्साही बनाउने छ । कतिपय काम गर्ने सिलसिलामा ‘सधैँसधैँका लागि तेरो राजनीति समाप्त पारिदिन्छु’ भन्ने धम्की पनि आउँछन् । कस्ता कस्ता धम्की आउँछन् कुरै नगर्नुस् । तिनीहरूले जे जे भनेका थिए, त्यही त्यही मानेर हिँडेको भए त सजिलो भइहाल्थ्यो नि ।
कसैको योग्यताबाहिर बसेर गाली गर्ने हुन्छ, कसैको फेसबुकमा लेखेर गाली गर्ने हुन्छ, कसैको भाषणमा गाली गर्ने योग्यता हुन्छ भने कसैको साँच्चिकै काम गर्ने योग्यता हुन्छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि काम गरेकै हुनाले जिम्मेवारी दिइएको हो । जसले योग्यता प्रदर्शन गर्छ, त्यो त आउँछ । एकदमै नेगेटिभ, गाली मात्रै गर्ने मान्छेलाई तपाईंले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति बनाउनुभयो भने के होला भन्नुस् त ? असाध्यै पूर्वाग्रही मान्छेलाई संस्थाको जिम्मा दियो भने के हुन्छ होला ? सरकारमा बसेर सोच्दा त यस्ता सबै कुरा पनि विचार गर्नुपर्छ होला नि । संस्थालाई कसरी राम्रो र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ होला नि । बाहिरबाट पो जस्तो पनि सोच्न सकियो ।